Iran : Fisamborana Alika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 2:14 GMT
Vakio amin'ny teny हिन्दी, Français, 日本語, বাংলা, Español, Português, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 13 septambra 2007 no nivoaka ny lahatsoratra teny anglisy)
Nitatitra ilay bilaogera Dastan [En] fa nisambotra alika maromaro ny polisy Iraniana tamin'ny 9 septambra mba hanala ny firenena amin'ny “fisarihana tandrefana » sy ny “tsy fahamendrehana”. Tohina ireo tompona alika ary niahiahy tanteraka mikasika izay mety hanjò ny alikan'izy ireo. Nilaza koa i dastan fa sady tsy mahazo rano no tsy mahazo sakafo ireo alika ireo. Porofon'ny fisamborana azy ireo sy ny fanidiana azy ireo amin'ny toerana manokana ireto sary manaraka ireto.
Nandefa ny sarin'ireo alika ireo ihany koa ilay bilaogera kamangir [En] ary nanamarika hoe:
Tsy tokony gadraina ao anatin'izany fepetra izany ireo alika ireo saingy na izany aza, tsy mbola tsara kokoa noho izao ny fitondrany ny olombelona.
Nahitàna fanehoan-kevitra manazava ny anton'ny «fisamborana» ireo alika ireo ny lahatsoratr'i kamangir :
Ho an'ny Islamo, maloto ireo alika ireo ka ny olona manana alika dia tokony hanasa tanana ohatra rehefa avy misafosafo azy ireo. Mihevitra aho fa tokony hanasa ny karipetra ivavahan'izy ireo koa ny mpivavaka raha nipetraka teo im-pito ny alika, ary tahaka izany foana. Izany no mahatonga ny IRI manohitra mafy ny fiompiana alika ao an-trano, mihevitra izy ireo fa ny olona manana alika dia tsy tena Miozolomana tsara. Mampalahelo, tena namana hendry ny alika.
Fanehoan-kevitra hafa avy amin'i tedders kosa nanana fanontaniana tsara dia tsara :
Mahazo manana biby fiompy ve ny Miozolomana tena izy? Sa miankina amin'ny sampan'ny Islamo na ny safidin'ny mollah ho arahana izany?”
Misy ihany koa ny fampahalalam-baovao hafa nilaza ny fisamborana tovolahy iray nametaka afisy fitadiavana alika tao amin'ny faritra misy azy rehefa very ny alikany.
Nosamborina ny tovolahy Iraniana iray nitady ny alika keliny very tao amin'ny faritr'i Tehran ary natao fanadihadiana noho ny «fitondran-tena voakolikoly». Araka ny filazan'ny gazety Tehran daily, tratra nametaka afisy milaza fa hanome valisoa ho an'izay mahita ny alikany i Etemad Melli.